galmudugnews.com » Cabdi Shukri ” Hadii ay qasab iyo foowda tahay Doorashada Galmudug waxaan ahay Musharax cideey u daran tahay hala arko”
Home » WARARKA » Cabdi Shukri ” Hadii ay qasab iyo foowda tahay Doorashada Galmudug waxaan ahay Musharax cideey u daran tahay hala arko” Cabdi Shukri ” Hadii ay qasab iyo foowda tahay Doorashada Galmudug waxaan ahay Musharax cideey u daran tahay hala arko” galmudug on
No Comment Views 163012KU: DHAMAAN MASUULIYIINTA IYO BULSHADA GALMUDUG
Assalaam Caleykum Wa Raxmatullah Wa Barakaatuhu
UJEEDO: MUSHARAXTINIMADA MADAXWEYNAHA GALMUDUG
Waxaa waayahaan soo badanaya musharaxiinta isku soo sharaxeysa madaxtinimada Maamulka Galmudug.
Ilaa markii maamulkaan Dawlada Galmudug uu madaxda ka yahay Madaxweyne Caalin la dhisay ilaa waqtigaan la joogo, Maamulkaan kama bixin dhib, Isqabqabsi,Mooshin iyo lugooyo loo geysanayo. Waxaana shidadaas had iyo jeeraale dabada ka riixaayo rag Siyaasiin iyo masuuliyiin sheeganaya oo markasta fowdo iyo afgembi ku wada Maamulka Sare ee Galmudug oo raba in ay si dadban talada Maamulka Galmudug kula wareegaan.
Waxaan baaq u diraya raggaas ku can baxay fowdada iyo shidada in ay ka waan toobaan falalka guracan ay mar kasta kula kacayaan Maamulka sare ee Galmudug, oo ay bedelkeeda u istaagan sidii ay Maamulkaan Galmudug kala shaqeeyaan Hormarkeeda,Midnimadeeda, balaarinteeda iyo Badbaadinteeda.
Ku simaha Madaxweynaha macnaheeda ma ahan waa Madaxweyne. Ma ahan in uu go’aan aan Madaxweynaha la ogeyn qaadan karo ama wax magacaabi karo. Sidaas daraadeed sharciga ma waafaqsana magacaabisti uu Madaxweyne Ku xigeenka Galmudug uu ku magacaabay gudiga dooroshooyinka Galmudug iyada uu san la socodsiin ama latashan Madaxweynihiisa.
Gudoomiyihi hore ee Barlamaanka Galmudug Mudane Xassan Maxamud Heyl awood sharci ah uma haysto in uu kala diro Barlamaanka Galmudug. Awood dikreeto Madaxweyne ah ayaa Barlamaanka lagu kala diri karaa. Haddi isaga iscasilay, waa shaqsi iscasilay oo tegey, markaas waxaa Barlaamanka Galmudug waajib ku ah in ay doortaan Gudoomiye Baarlamaan oo cusub hawshoodana ay sii wataan.
Waxaan mar labaad iyo mar sedexaad ku celinaya in aan waafaq sanahay warkii ka soo baxay Madaxweyne Caalin, Gudoomiye Ku xigeenki Galmudug Mudane Cawke Sh Cabdiraxman iyo Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Mudane Abshir Diini oo ay sheegeen in ay waqtiga Maamulka Galmudug uu ku eg yahay Bisha Labaad ee 2013ka.
Marka waxaan hadana baaq nabadeed u diraya Masuuliyiinta Musharaxiinta isku soo taagtay in ay u tartamaan doorashada Madaxtinimada Galmudug in ay sugaan waqtiga yar ee ka harsan Maamulka Galmudug, Nidaamka iyo sharcigana Galmudug ay dhowraan.
Haddi ay qasab iyo fowda tahay in ay dhacayso bisha sideedaad doorashada Madaxtinimada Galmudug , waxaan halkaan ka cadeeynaya in aan diyaar la ahay dhaqaalahayga, aqoonteyda, xiriirkeyga caalami iyo kartideyba oo aan la shir tago degaanka Galmudug si aan uga qeybqaato una tartamo si aan Madaxtinimada Maamulka Galmudug u qaban laha, cidey u daran tahay hala arkee.
Cabdishukri Xaaji Cali Xirsi
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21020 hitsContact US - 19681 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15783 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15422 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13962 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13916 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13832 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13697 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11830 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11803 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11745 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11538 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11510 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11367 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11249 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11173 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11080 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11065 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10854 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10484 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10360 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10352 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 10047 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10035 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9794 hits Home About